बेबी थापा बाट स्मिता थापा - साप्ताहिक
'मलाई लोग्ने होइन, लोग्ने मानिस चाहिन्छ' शीर्षकमा साप्ताहिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तापछि अत्यधिक चर्चामा आएकी मोडल स्मिता थापाको उक्त अन्तर्वार्तालाई आधार बनाएर उपन्यासकार राजेन्द्र थापाले उपन्यास 'खेलौना' लेखे। त्यसपछि स्मिता थप 'हट केक' भइन्। स्मिताकी सहोदर बहिनी बेबी थापा पनि मोडल हुन्। ग्ल्यामरस तस्बिरहरू खिचाएर चर्चामा आएका बेबी र स्मिता दिदी-बहिनीभन्दा पनि अत्यन्त मिल्ने सखीजस्ता छन्। हरेक समय साथै देखिने भएकाले मानिसहरू बेबीलाई स्मिता र स्मितालाई बेबी भनेर समेत झुक्किन्छन्। एकअर्कासँग ठट्टा गरिरहने यी दिदीबहिनीमध्ये बहिनी बेबीले दिदी स्मिताको कुरा यसरी काटिन् ः
हँसिली ः जतिसुकै टेन्सन भए पनि हाँसी-हाँसी बस्न सक्ने, उनको हँसिलो व्यवहार मलाई निकै मन पर्छ।
मनकारी ः कसैको दुःख देख्न नसक्ने, सेवाका लागि उनको हात सधैं अघि बढेको पाएकी छु।
सेक्सी फिगर ः उनको फिगर अति नै मिलेको छ। कद सानो भए पनि उनको मिलेको फिगर मलाई त सेक्सी लाग्छ भने पुरुषहरूलाई किन नलागोस्?
'बिन्दास’ स्वभाव ः मनमा लागेको कुरा जसलाई पनि भन्न सक्छिन् र उदार छिन्।
निडर ः कसले के भन्छ? भन्ने कुराको डर छैन। मनमा लागेको कुरा निर्धक्क भएर बोल्छिन्।
घमन्डी ः चर्चामा आएपछि उनी घमन्डी भएको पाएकी छु। उनलाई आफ्नो रूपको निकै घमन्ड छ।
रिसाहा ः रिसको आवेग चढेपछि आँखा देख्दिनन्। घरभरि तोडफोड गर्छिन्।
अनियन्त्रित मदिरापान ः पिउन बसेपछि अति नै मात्तिने गरी पिउनुपर्छ। त्यो बानी मलाई मनपर्दैन।
एक्स ब्वाइफ्रेन्डको कुरा काट्ने ः ब्वाइफ्रेन्ड फेरिरहन्छिन्, अनि एक्स ब्वाइफ्रेन्डको कुरा काटिरहन्छिन्। मैले चाहिँ त्यो कुरा सुनिरहनुपर्छ।
डाइटिङ गर्ने ः पहिले मोटी थिइन्। डाइटिङ गरेर दुब्लाएकी छिन्। अझै पनि डाइटिङ गरिरहन्छिन्। धेरै डाइटिङ गर्दा स्वास्थ्यमा हानि पुग्छ भनेर धेरैपटक सम्झाइसकेँ, टेर्दिनन्। ज्यान नै जोखिममा राखेर के राम्री हुनु?